“Hore Ayaa Xukuumaddii KULMIYE Hadh-cad Jabuuti Ugu Gacan Galisay….” Abwaan Weedhsame Oo Caddeeyey Mowqfikiisa Ku Aadan Dalabka Jabuuti Ee Ganacsade Axmed Geelle – somalilandtoday.com
“Hore Ayaa Xukuumaddii KULMIYE Hadh-cad Jabuuti Ugu Gacan Galisay….” Abwaan Weedhsame Oo Caddeeyey Mowqfikiisa Ku Aadan Dalabka Jabuuti Ee Ganacsade Axmed Geelle
(SLT-Hargeysa)-Abwaan Xasan Daahir Ismaaciil (Weedhsame) oo kamid ah hal-abuurka caanka ah ee reer Somaliland, ayaa ka hadlay qorshaha xukuumada Jabuuti ku doonayso in loogu gacan galiyo Ganacsade Axmed Geelle.
Dhinaca kale, Abwaan Weedhsame ayaa ku tilmaamay waxaan suurto-gal ahayn dalabka dowlada Jabuuti ee Ganacsade Axmed Cismaan Geelle, isagoo sheegay inay ahayd in la waydiiyo halka ay ku danbeeyeen kuwii hore loogu dhiibay.
Abwaan Weedhsame ayaa kaga hadlay Arrimahan, qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook, waxa uuna u dhignaa qoraalkiisu sidan:
“ICTIRAAFKA DADKAYAGAA KA MUHIIMSAN!!!!
2014-kii ayaa Qaraxyo ka dhaceen dalkaa aan deriska nahay ee Djibouti. Dawladda jibouti ee uu hoggaamiyo Ismaaciil Cumar Geelle, ayaa ku dooday inay jiraan dad reer Somaliland ah, oo soo ambabixiyey soona tabaabulsheeyey dadkii Qaraxa geysatay.
Warbaahinta dalka ka soo baxda qaar ka mid ahi, bishii july 2014-kii waxay qoreen in raggii la dhiibay mid ka mid ahi xabsiga Jibouti ku dhex geeriyooday, sababtuna tahay jidh-dil axmaqnimo ah oo loo geystay darteed. Waxse aan hubaa inu weli, Cabdillaahi Sheekh Cabdiraxmaan oo reer Gebiley ahi ilaa maanta gacanta ugu jiro Cadawgaas sidii hadyada loogu hibeeyey!!!
Haddaba hadalkii xukuumadu dhan uun buu ahaaye dhexdhexaad muu ahayn. Waayo Xukuumadu inoomay sheegin Axmed Cismaan Hantida kaga maqan Jibouti ee awoodda dawladnimo lagaga haysto Sida looga soo qaadayo iyo cidda uga soo qaadaysa.”
Golaha Deegaanka magaalada South Portland ee dalka Maraykanka ayaa Deeqa Cabdi Dhalac u doortay inay noqoto...
(SLT-Paris)-Nin Sacuudiyaan ah oo looga shakisan yahay inuu ku lug lahaa dilka weriye Jamal Khashoggi ayaa...
By Wariye December 7, 2021
Maxkamadda Sare ee Jamhuuriyadda Somaliland ayaa go’aan ka soo saartay cabasho ay u soo gudbiyeen wakiilka...
Ciidammada Socdalka Somaliland Oo Soo Bandhigay Rag Ajaaniba Oo Samaynayay Lacago Been Abuur Ah.
Qaxoonti Ka Soo Qaxay Dagaalka Itoobiya Oo Soo Gaadhay Somaliland
Qaxoonti tirro baddan oo ka soo bara kacay dagaalka ka socda dalka Itoobiya ee u dhexeeya...